उडिरहेको विमानको ट्वाइलेटबाट तपाइ कै टाउकोमा मलमुत्र खस्यो भने के हुन्छ ? - jagritikhabar.com
उडिरहेको विमानको ट्वाइलेटबाट तपाइ कै टाउकोमा मलमुत्र खस्यो भने के हुन्छ ?
विश्वमा समय समयमा पत्याउन गाह्रो पर्ने खालका घटनाहरु हुने गर्छन । यस्तै एक घटना बाहिर आएको छ । वास्तवमा, संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लन्डनको पश्चिमतिर पर्ने बर्कशायरका एक व्यक्ति आफ्नो बगैँचामा सुस्ताइरहेका बेला अनौठो घटना भएको हो ।
ति व्यक्तिमाथि र बगैँचाभर एउटा विमानबाट खसालिएको मानव मलमूत्र नरमाइलो तरिकाले छरपस्ट भएको कुराले सबैलाई हैरान बनाएको छ । त्यो घटना गत जुलाई महिनाको मध्यतिर भएको थियो ।
तर अहिले स्थानीय तह–काउन्सिलको बैठकमा छलफल भएपछि बल्ल त्यो घटना चर्चामा आएको छ । द रोयल बरो अफ विन्सर एन्ड मेडनहेड्स एभिएशन फोरमको बैठकमा बोल्दै काउन्सिलर क्यारन डेभिसले आफूलाई एक जना स्थानीय बासिन्दाले सम्पर्क गरेर कसरी उनको बगैँचा, बगैँचामा राखेको ठूलो छतरी र उनी आफैँ मलमूत्रमा परे भन्ने घटना बारे जानकारी दिएको बताइन् ।
त्यस्तो घटना कसरी हुन पुग्यो र के अब हामीले आकाशमा के हुँदैछ भनेर समेत विचार गर्नु पर्ने भएको हो ? भनेर प्रश्न पनि गरिन् । जानकारी अनुसार ती व्यक्ति विन्सर भन्ने शहरमा बस्छन् । त्यही बाटो हुँदै विमानहरू लन्डनको पाँचमध्ये सबभन्दा ठूलो विमानस्थल हिथ्रोतर्फ लाग्छन् ।
डेभिसका अनुसार हरेक वर्ष विमानबाट हिउँ झैँ जमेको मलमूत्र झर्ने घटनाहरू हुने गरेको उनलाई जानकारी छ । तर यो घटना त असाध्यै नरमाइलो तरिकाले भएको पाइयो । अर्का काउन्सिलर जन बाउडेन भन्छन, “उनी आफ्नो बगैँचामै भएका बेला त्यस्तो हुनु त असाध्यै नराम्रो अनुभव भयो । शायद त्यस्तो फेरि कसैलाई नहोला ।” त्यसलाई एक अर्बमा एक पटक हुनसक्ने सम्भावना भएको घटनाका रूपमा उनले लिएका छन् ।
न्यानो मौसमका कारण पनि त्यो मलमूत्र त्यसरी तरल अवस्थामा तल झरेको हुनसक्ने उनी ठान्छन् । विमानका शौचालयमा जम्मा हुने मलमूत्र विशेष ट्याङ्कमा जम्मा हुन्छ जुन विमान अवतरण गरेपछि खाली पारिन्छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धी अधिकारीहरू त्यस्ता ट्याङ्की विमान आकाशमै हुँदा कहिलेकाहीँ चुहिने स्विकार्छन् । बीबीसी रेडियो बर्कशायरले उडान विज्ञ जुलियन ब्रेसँग कसरी त्यस्तो चुहावट हुन सक्छ ? भनेर सोधेका थियो। ब्रेले भने, “आधुनिक विमानमा भ्याक्युम शौचालय हुन्छन् ती निकै सुरक्षित र राम्रोसँग बन्द गरिएका हुन्छन् ।
शौचालय प्रणाली र जम्मा हुने ट्याङ्कबीचको भ्याक्युम जोर्नीमा भने समस्या आउन सक्छ ।” उनी थप्दै भन्छन्, “विमान चलिरहँदा विभिन्न प्रकारका चाप विकास हुने भएकाले त्यहाँ केही लचक बनाउनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा सील गर्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ शत प्रतिशत बन्द नहुन सक्छ ।”
उनका अनुसार मानै विमान जमिनतर्फ अवतरणका लागि झर्दै गर्दा उदाहरणका लागि ६,००० फीटमा पुग्यो, तब हावाको चाप परिवर्तन हुन्छ ।त्यसैबेला विमानको मलमूत्र ट्याङ्की चुहिन्छ। दुर्भाग्यवश ती व्यक्ति त्यो बेला बगैँचामा रहेछन् । र उनको बगैँचामा भएका दुई छातासहित सबैमा मलमूत्र पर्यो ।